Lapho ukungathandi jikelele ezihuquzelayo umbuzo yini dream inyoka emanzini, indlu noma emgwaqeni, ngisho abantu ehluzekile engqondweni nesithakazelo. Ngokugcwele zonke ukuqala ongakulindela esizayo izinkinga, izinkinga futhi ezimbi. Emzamweni ukuvimbela noma okungenani nokunciphisa imiphumela esizayo ohlupha abantu bezama ukwembula incazelo yephupho, ukuthatha izinyathelo ezifanele.
Inyoka njengoba iwuphawu
Iningi iphupho-izincwadi sithambekele kulokhu kucabanga ukuthi ezihuquzelayo snyaschiesya cishe kunoma yiluphi uhlobo - uphawu ezimbi futhi sibonakala sethusa. imibono enjalo wawusho ukulahlekelwa ngokomoya nokudumazeka, acebe izingobe futhi izitha nomona, inala inhlebo ngawe. Kodwa ungakhohlwa ukuthi eduze inyoka lifanekisela ngokuhlakanipha. Thola okungenani samuntu yaphakade ngesimo Ouroboros noma ilogo abelaphi - inyoka obvivshuyu isitsha. Ngakho, ngicabanga ukuthi uyaphupha izinyoka (emanzini noma umhlaba), cabangela amathuba ukuthi kubhekwe njengento isixwayisa ukuthatheka ngokweqile, ucingo ngokuziphatha ezinengqondo nabanye.
Hlobo luni inyoka?
Ezimweni eziningi, elinde esikhathini esiseduze esizayo, ukukhohlisa noma ukukhashelwa - lena yini amaphupho izinyoka emanzini. Nokho, kukhona ubuqili. Ngokwesibonelo, uma ngiphupha enesihlungu, yayisibangele umsila emhlabeni amagatsha futhi elintantayo phansi emfuleni, kuyisibonakaliso sokuthi phakathi kwabantu abaseduze nawe abantu abe umuntu ofukamela maqondana ongayithandi futhi ukupheka ngawe ezinye iqhinga ezingcolile. Nokho, uma nizosho iphupho iyona enesihlungu efanayo, ukulwa phezu komfula nge inyoka amanzi, khona-ke, lowo mphuphi walelo uyosibonisa zonke izingobe, unqobe izitha sixoshe amahemuhemu ngaye.
Ephambi kwezinduna sibukele lesi senzakalo lapho sibhekene a umsindo ovala izindlebe wokudubula croaking amaxoxo dream incazelo kunikezwa nhlobo ezahlukene: phambi usalindeni umsebenzi omuhle nzima, okuzokwenza ukuthi baphumelele kuphela bachitha nomzamo wangempela. Kodwa kufanele wenze: umphumela ngeke sijabulise wena ukusekela isikhathi eside.
Inani lohlobo kwesigubhu
Ukuze ngokunembile baqonde ukuthi uyaphupha izinyoka emanzini, omunye kufanele sinake ukuthi kuyini. Ngakho, uma ubona kubo, ukuwela umfula, okusho ukuthi ngaphambili elinde okuthile lwenhlanhla, kepha phambi lo mcimbi ukhathazeke okuningi.
Ukukhohlisa ukuzethemba we nengangibajwayele yamuva - yilokhu amaphupho kukhona nezinyoka eziningi emanzini womthombo. Okungenani ngesonto emva leliphupho akufanele eduze bazibonele futhi ukholwa amazwi ubuso obusha endaweni yakho.
Floating echibini elincane lisho inyoka ngobuqili esiseduze umngane noma ubudala. Uma ichibi likhulu noma amanzi - kolwandle, kuyokunikeza ezinye ngaphezulu zokuxhumana imiphumela yesikhathi eside ezayo. Snake echibini - ukucunula etulweni lokumbulala ingxenye osebenza nabo.
Lone silwane aquarium utshela umphuphi ukuthi eceleni kwakhe - ngumzenzisi, ungathandi, kodwa obonisa umngane onozwela. Futhi yeka iphupho eziningi izinyoka kwesigubhu samanzi ekhaya? Ukuze melancholy, ukudabuka ngisho nokucindezeleka. Mhlawumbe bayoba izikhathi, Mhlawumbe wena umane ukhathele futhi ethukile ngaphandle kwesizathu.
Njengoba wazi, iphupho for the isigamu fair lesintu kungasho okuhluke ngokuphelele kuleso esithathwa abesilisa. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile ngempela akusiyo ubulili kuphela, kodwa futhi ubudala. Ngokwesibonelo, yini iphupho inyoka owesifazane emanzini kuncike isimo salo: Mature, aphethwe enye intokazi wabona iphupho, cishe, maduze ukuthola ukuzimela kwezezimali oluvela kumyeni wakhe. Intombazanyana noma owesifazane osemusha oshadile, kwavela phakathi iphupho inyoka emanzini, ngokushesha ulindela injabulo nabantu obathandayo. Nokho, i-abesifazane babo bonke ubudala ukubona e amaphupho abaningi ukubhukuda ezihuquzelayo - isizathu sihlolisise kiloyo egade sele akhethiwe: mhlawumbe ukhohlisa wena kanye nezinguquko.
Kungani iphupho inyoka emanzini: kokulunywa noma ukuhlaselwa
Ukuhlasela ncwadi iningi iphupho uthathwa njengomgcini ngengozi esondelayo. Okungenani, uyofuna ukusebenzisa ukufeza amacebo abo abantu enamandla kakhulu (futhi ocebile kakhulu). Esikhathini okunye, nesitha noma akuvumele phansi isimo on the esengozini lobugebengu noma ukuphazamisa ngokungathí sina nokuvumelana emkhayeni. Uma isilwane esihuquzelayo Uvula kwamanzi emhlabeni ingozi eduze kakhulu. Uma manje bese diving kanye livela kwenye indawo ezingalindelekile, ukunquma ukuthi ubani isitha lapho uhlose ukuba cishe kungenakwenzeka. Kodwa uma wena wakwazi ukuqeda ephusheni, ukubamba noma ukubulala isilwane esihuquzelayo, khona-ke ukuba nesikhathi esimnandi zokunciphisa ukulahleka esiphansi.
Enye incazelo yalokho ukuphupha inyoka enkulu emanzini, eluma wena, leliphupho ubikezela ukungqubuzana izimo angenakuvinjwa, ngokumelene lapho abanamandla. Ngakolunye uhlangothi, uma isiguli nephupho, ke umemezela ambulensi impilo isichibiyelo.
Nokho, abanye bakholelwa ukuthi eziqeda amandla ngiphuphe yokudla inyoka ungakhuluma mayelana nokunonophala ezingalindelekile, ezifana abathola ifa kusuka isihlobo ezikude engajwayelekile.
Kwezinye izimo, iphupho we ezihuquzelayo emanzini esiyibika kahle umcimbi. Ngakho, le nyoka, kuphela ukuba ingene ichibi, noma elintantayo ngaphansi kwamanzi kancane kancane, othembisa Housewarming noma ezihamba up isitebhisi umsebenzi. Isidalwa efile ilele emanzini, lokhu kuvumela gidi: ingozi sinyamalale, futhi kulapho kungukuthi ezisengozini.
Indlela ukhethe intfo "Photoshop" futhi ahlukaniswe kusukela ngemuva
The movie ezithakazelisayo kakhulu mayelana nempi